ỊHAZI CONFOLDERS SHARED FOLDERS NA LINUX - VIRTUALBOX - 2019
Maka nlekota nlekota nke oma nke osiri oma na oma na VirtualBox, o bu ike ime ka nchekwa nchekwa. Ha na-esitekwa n'aka ndị ọbịa na usoro ndị ọbịa na-esite ha ka ha wee nwee ike ịgbanwe data n'etiti ha.
Ikekọrịta nchekwa na VirtualBox
Site na nchekwa nchekwa, onye ọrụ ahụ nwere ike ịlele ma jiri faịlụ echekwara na mpaghara ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ nnabata, kamakwa na OS onye ọbịa. Njirimara a na-eme ka mmekọrịta nke usoro sistemụ dị mfe ma kpochapụ mkpa ọ dị jikọọ draịvụ ọkụ, nyefee akwụkwọ na ọrụ nchekwa nchekwa igwe na usoro nchekwa data ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1: Ịmepụta nchekwa dị na igwe ụlọ ọrụ
Mpekọrịta ndịkọrịta nke igwe abụọ nwere ike ịrụ ọrụ na ọdịnihu ga-adị na isi os. A na-eke ha n'otu ụzọ ahụ dị ka nchekwa mgbe niile na Windows ma ọ bụ Linux. Tụkwasị na nke a, ị nwere ike ịhọrọ ọ bụla dịnụ dịka folda nkekọrịta.
Nzọụkwụ 2: Hazi VirtualBox
Ejirila nchekwa ma ọ bụ họrọ nchekwa maka usoro sistemụ abụọ site na ịhazi VirtualBox.
Mepee VB Manager, họrọ igwe kwadoro ma pịa "Hazie".
Gaa na ngalaba "Nkọkọta Ekekọrịta" ma pịa akara ngosi ahụ dị na nri.
A windo ga-emeghe ebe a ga-ajụ gị ka ị kọwaa ụzọ na folda ahụ. Pịa na akụ na site na menu dropdown họrọ "Ndị ọzọ". Dee ebe site na onye nyocha ihe n'usoro ihe.
Ubi "Aha nchekwa" A na-ejikarị jigharị ya site na ịgbanwe akara aha mbụ ahụ, ma ị nwere ike ịgbanwe ya na ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Mee ka oke "Jikọọ onwe gị".
Ọ bụrụ na ịchọrọ igbochi mgbanwe ndị na nchekwa maka os onye ọbịa, wee lelee igbe dị n'akụkụ àgwà ahụ "Naanị gụọ".
Mgbe ọnọdụ ahụ zuru oke, folda ahọrọ ga-apụta na tebụl. Ịnwere ike itinye ọtụtụ nchekwa dị otú ahụ, ha niile ga-egosiputa ebe a.
Mgbe a mechara nke a, ị ga-achọ iji ngwanrọ ndị ọzọ maka VirtualBox gee ntị.
Nzọụkwụ 3: Wụnye mgbakwunye ntinye akwụkwọ
Mgbakwunye Ndị Adị na VirtualBox bụ ihe dị mma nke atụmatụ dị elu maka ịrụ ọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ arụmọrụ.
Tupu ịwụnye, echefukwala imelite VirtualBox ka ọ bụrụ na ị ga - enwe nsogbu na mmemme nke usoro ihe omume ahụ na mgbakwunye.
Soro njikọ a na saịtị nbudata nke ebe nrụọrụ weebụ VirtualBox.
Pịa na njikọ "Nkwado niile akwadoro" ma budata faịlụ.
Na Windows na Linux, a na-etinye ya na ụzọ dịgasị iche iche, ya mere, anyị ga-ele anya ma nhọrọ abụọ n'okpuru.
Ịwụnye VM VirtualBox Extension Pack na Windows
Na menu aha VirtualBox, họrọ "Ngwaọrụ" > "Ugo oyiyi onyinyo nke ọbịa OS tinye-ons ...".
Akpadoro emulated na onye ntinye onu ogugu ndi mmadu ga-aputa na Windows Explorer.
Pịa bọtịnụ ugboro abụọ na bọtịnụ aka ekpe ka ịmepụta onye ahụ.
Họrọ nchekwa na osịpụ osụl ebe a ga-arụnye add-ons. Ekwadoro ka ị ghara ịgbanwe ụzọ ahụ.
A na-egosipụta components ndị ahụ iji wụnye. Pịa "Wụnye".
Ntinye ga amalite.
Na ajụjụ: "Wụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ a?" họrọ "Wụnye".
Mgbe achichachara, ị ga-eme ka ịmalitegharịa. Kwere site na ịpị "Emecha".
Mgbe ị gagharịrị, gaa Explorer, na mpaghara "Network" Ị nwere ike ịchọta folda otu ahụ.
N'ọnọdụ ụfọdụ, nchọpụta netwọk nwere ike gbanyụọ, na mgbe ị pịrị "Network" Ozihie a gosiri:
A nchekwa ga-emepe ị ga-amara gị ọkwa na enweghị netwọk adịghị. Pịa ngosi a ma họrọ site na menu "Kwado Nchọpụta weebụsaịtị na Njikwa Ikekọrịta".
Na windo na ajụjụ nke ịchọta nchọpụta netwọk, họrọ nhọrọ mbụ: "Mba, mee ka netwọk a jikọọ na nkeonwe".
Ugbu a site na ịpị "Network" na aka ekpe nke windo ọzọ, ị ga-ahụ ọkwa a na-akpọ "VBOXSVR".
N'ime ya ga-egosipụta faịlụ echekwara na folda ahụ ị na-akọrọ.
Ịwụnye VM VirtualBox Mgbati Pack na Linux
Ịwụnye mgbakwunye na OS na Linux ga-egosi na ihe atụ nke nkesa nkesa kachasị - Ubuntu.
Malite melite usoro na na VirtualBox menu mmanya họrọ "Ngwaọrụ" > "Ugo oyiyi onyinyo nke ọbịa OS tinye-ons ...".
Igbe na-amalite ịjụ gị ka ị na-agba faịlụ ahụ na-arụ ọrụ na diski. Pịa bọtịnụ ahụ "Gbaa ọsọ".
Usoro nhazi ahụ ga-egosipụta na "Njedebe"nke enwere ike mechie.
Ihe nchekwa ekemere ekemere enweghi ike inweta ya na njehie na-esote:
"Emezighi igosi ọdịnaya nke nchekwa a. Enweghi ikikere iji lee ọdịnaya nke ihe ndepụta".
Ya mere, a na-atụ aro ịmepe windo ọhụrụ n'ihu. "Njedebe" ma tinye iwu dị n'ime ya:
sudo adduser account_name vboxsf
Tinye paswọọdụ maka sudo na ichere ruo mgbe agbakwunye onye ọrụ na vboxsf otu.
Degharia igwe di elu.
Mgbe ịmalitere usoro ahụ, gakwuru onye na-enyocha, na ndekọ na aka ekpe chọta nchekwa ahụ e kesara. N'okwu a, nkịtị bụ nchekwa usoro "Images". Ugbu a, enwere ike iji ya rụọ ọrụ site n'aka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọbịa.
Na nkesa Linux ndị ọzọ, nzọụkwụ ikpeazụ nwere ike ịdịtụ iche, ma n'ọtụtụ ọnọdụ, ụkpụrụ nke ijikọta nchekwa nchekwa dị otu.
N'ụzọ dị mfe a, ị nwere ike ijikọ ọnụ ọgụgụ ọ bụla nke nchekwa nchekwa na VirtualBox.